ကန်တော့ပွဲ ဘယ်ကဖြစ်လာသလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကန်တော့ပွဲ ဘယ်ကဖြစ်လာသလဲ
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Dec 24, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
အာဋာနာဋိယသုတ်မှာပါတဲ့ နဂါး၊ ဂဠုန်၊ ကုမ္ဘဏ်၊ ယက္ခ၊ ဂန္ဓဗ္ဗတို့ဆိုတာ ပူဇော်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှိခိုးဖို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သိကြားမင်းရဲ့ အမိန့်ကြောင့် ဝေဿ၀ဏ်နတ်မင်းစတဲ့ နတ်အပေါင်းတို့ဟာ သာသနာကြည်ညိုသူများကို စောင့်ရှောက်ပေးရပါတယ်။ အဲဒီလို သူတို့စောင့်ရှောက်တာကို မိမိတို့က ငှက်ပျောသီး၊ အုန်းသီးစတာတွေ သူတို့အတွက် တင်ဖို့မလိုပေ။ ဒါကြောင့် ကန်တော့ပွဲဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအရသာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး နတ်စတာတွေကို ပူဇော်ပသဖို့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ နားလည်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို ပြည့်စုံလိမ့်မယ်ထင်လို့ ဒီမှာပဲ နိဂုံးချုပ်ပြီး စာဖတ်သူအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလျက်….။
အုန်းသီးက ဘာအဓိပ္ပါယ်ပါလဲ ။ ဘာကြောင့်အုန်းသီးထည့်ရတာပါလဲ။
ငှက်ပျောသီးက ဘာအဓိပ္ပါယ်ပါလဲ။ ဘာကြောင့်ငှက်ပျောသီးကိုထည့်ရတာပါလဲ …. ဆိုတာပါဘုရား။
အင်း ငှက်ပျောသီး၊ အုန်းသီးကိုပဲ ကန်တော့ပွဲအဖြစ် ဘာဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ပြုလုပ်ကြသလဲဆိုတာတော့ ရှေးအစဉ်လာသမိုင်းကို သိမှသေချာမယ်။ ဦးဇင်း အထင်ပြောရရင်တော့ ငှက်ပျောသီးဟာ နေရာတကာမှာ ၀ယ်လို့လွယ်ကူတာရယ်။ နောက်ပြီး အုန်းသီးနဲ့လိုက်ဖတ်မှုရှိတာကြောင့်၊ အုန်းသီးနဲ့ငှက်ပျောသီးထည့်လိုက်ရင် ကန်တော့ပွဲ လှပကြည့်လို့ ကောင်းတာကြောင့်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အုန်းသီးဟာ အပူကို ငြိမ်းစေနိုင်တဲ့သတ္တိရှိတယ်လေ။ မီးလောင်တဲ့လူကို အုန်းရေတိုက်တာ အပူငြိမ်းအောင်လို့တဲ့။ အဲဒီလိုပဲ အုန်းသီးကို ကန်တော့ပွဲတင်တာဟာ ရှိခိုးကန်တော့သူများက မိမိအပူငြိမ်းအောင် တင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။
အုန်းသီး ဘယ်လောက်ပဲ လှလှ
ငှက်ပျောသီး ဘယ်လောက်ပဲ လန်းလန်း
ဝတ္ထုငွေ စာအိတ် မပါလျှင်
မတင့်တယ်ဟု ဖြစ်နေကြောင်းပါ ဘုရား
ပြောမှားဆိုမှားရှိရင်တော့ ကန်တော့တောင်းပန်ပါတယ်ဘုရား …
သာသနာပွဲအဖြစ်ကန်တော့ပွဲထိုးတာကို မသင့်တော်ဘူးလို့ပဲမြင်ပါတယ် ဘုရား
နတ်တွေအတွက် ကန်တော့ပွဲကတော့ ကိယ်ကိုးကွယ်တာမဟုတ်လို့ ဘာမှမပြောလိုပါဘူး
ဆရာ မိဘ စသည်ကို ကန်တော့တဲ့အခါ ပြင်တဲ့ကန်တော့ပွဲကတော့ ငှက်ပျောသီးနဲ့ အုန်းသီးအစား
အရှင်ဘုရား.. အခုလို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောပေးတာလေးအတွက်.. ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလိုပါတယ်ဘုရား..။
အဲဒါနဲ့. အင်တာနက်ထဲ အချက်အလက်ရှာပြီး..တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
အုန်းသီး ငှက်ပျောသီး ကန်တော့ပွဲက.. ဟင်ဒူကလာတဲ့..ယဉ်ကျေးမှု့လို့ထင်မိတယ်..
တကယ်တော့ ၃၇မင်းနတ်တွေလည်း ဟိန္ဒူကလာတာပါ…။
ဆိုတော့.. အင်တာနက်ထဲ.. အောက်ကအတိုင်းရှာတွေ့တယ်..။
Q.Why banana and coconut r most important in hindus pooja?
A. Sujana dear, it is because amongst the fresh fruits Coconut_the hardest [full risk] and Banana_the softest [no risk] and both fruit tend to cough & cold respectively.
မြန်မာတွေ.. အော်ရီဂျင်နယ် ဟိန္ဒူတွေထက်ကဲပြီး.. တိုင်းပြည်အရင်းအမြစ်ဖြုန်းတီးတာ ပိုများတာမို့.. အဲဒီဓလေ့အကျင့် ဖယ်ပစ်ဖို့သင့်တယ်.. ထင်မိတယ်..။ မြန်မာအများစုကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ..သာသနာနဲ့လည်း ဆိုင်တာမဟုတ်..။
ဘာမှန်းမသိ… သူများယောင်လို့.. လိုက်ယောင်တာမျိုးဖြစ်နေတယ် တွေ့မိတယ်..။
တိုင်းပြည်… ချမ်းသာလာရင်တော့ ..တမျိုးပေါ့..။
အခုက.. ငတ်နေတဲ့ကလေးတွေ.. မိသားစုတွေ..မီလီယန်ချီနေတာမို့ပါ..။
သူများယောင်လို့သာလိုက်ယောင်ကြတယ်…။ အမောင်ကတော့ တောင်မှန်းမြောက်မှန်း မသိဆိုတာတွေပေါ့….။ ဆြာတော်တွေက သေသေချာချာ တုတ်နဲ့ရိုက်ပြီး တရားဟော မှရမယ်…။ ရှေးတုန်းကလို……….လေး…။
ကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာကို လေ့လာတုန်းက စဉ်းစာခဲ့ဘူးတယ်။ ဖတ်ဖူးတဲ့ ရာဇ၀င်တွေထဲမှာလည်းအုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲ အကြောင်းမတွေ့ရဘူး။ ဘုရားပွဲဆို ငှက်ပျော ၃ဖီး အုန်းသီး၁လုံး ၊ သာသနာပွဲဆို ငှက်ပျော၅ဖီး အုန်းသီး၁လုံး ဆိုလားပဲ။ ကွမ်းယာကလည်းပါသေးတယ်။ အုန်းသီး ငှက်ပျောသီးပွဲ၁ပွဲနဲ့ နတ်ကို security ခေါ်လို့ရရင် security တွေ အကုန်အလုပ်ပြုတ်ကုန်ပါ့မယ်။ အုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲနဲ့ စီးပွားတိုးအောင်လုပ်လို့၇မယ်ဆိုရင်တော့ ဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ ၂ဆတိုးတာကို တောင် နောက်ကောက်ချပစ်မဲ့ မီလီယံ ဘစ်ဇနစ်တခုပဲ။ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုရှာချင်ရင် မသိုးထမင်း မသိုးဟင်းနဲ့လိုက်ရှာရင်တောင်တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူး။